Fikarohana momba ny firaisana Tantara momba ny fiainana taloha sy ny fanovana amin'ny finoana sy ny fitantarana momba ny fiainana ara-jeografika: tranga fanalefahana an'i Gioanna Spontini | Laure Raynaud - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiafarana: Fahatsiarovana ny fiainam-piainan'ny olon-dehibe
Mpikaroka: Gaston Durville, MD
From: Psychic Magazine ary Ireo tranga Eoropeana amin'ny karazana gay vaovao, avy amin'i Ian Stevenson, MD
Laure dia miteny amin'ireo ray aman-dreniny Tsy misy ny lanitra na ny helo
Laure Raynaud dia teraka tao 1868 tany amin'ny tanàna Frantsay any Aumont, akaikin'i Amiens. Mbola kely i Laure dia nikomy tamin'ny foto-pampianaran'ny Eglizy Katolika Romanina ary tsy maintsy nanery azy handeha ho any am-piasana ny ray aman-dreniny. Nanantitrantitra i Laure fa tsy ny mandeha any an-danitra na ny helo aorian'ny fahafatesana, ny olona dia nateraka indray tao amin'ny vatana hafa eto an-tany.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Laure no manambara ny Dr. Gaston momba ny androm-piainany any amin'ny tany Sunny
Tamin'ny taona 17 izy dia nanapa-kevitra ny hiasa toy ny mpitsabo mpanampy hafa, rehefa nianatra endrika hypnosis. Nifindra tany Paris izy ary nampiasa dokotera Dr. Gaston Durville tao amin'ny toeram-pitsaboana.
Laure dia nilaza tamin'i Dr. Gaston momba ny fahatsiarovan'ny fiainana taloha izay nananany, izay niainany tao amin'ny toetr'andro tony, tao amin'ny trano lehibe iray misy varavarankely goavam-be. Nisy varavarankely lehibe nanodidina ny trano, ary koa teratany kely teo an-tampon-trano. Nilaza izy fa nitranga nandritra ny zato taona lasa izany. Dr. Gaston dia nisalasala momba ny tantarany, saingy nihaino izy ary farany dia izy no namoaka ny tatitra mikasika ity raharaha ity.
Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana: Laure dia nahita ny fiainany taloha teo akaikin'i Genoa, Italia
Tamin'ny marsa 1917, Dr. Gaston dia nandefa Laure mba hitondra marary mpanankarena azy any Genoa, Italia. Rehefa nanatona an'i Genoa ny lamasinina, dia nahatsapa fahatsapana fahamendrehana izy, toy ny hoe nandeha namakivaky ity tany ambanivohitra ity izy talohan'izay. Nanjary nahatsapa izy fa teo amin'ny toerana niainany taloha. Tany Genoa, nizara ny fahatsiarovany niainany taloha izy ary nanontany raha misy trano ao amin'ny faritra mifanaraka amin'ny filazalazany.
Nentina tany amin'ny trano anankiray i Laure izay mety ho iray amin'ireo fiheveran'izy ireo no nieritreritra azy. Indray mandeha, nilaza i Laure fa tsy ilay trano tsaroany izany, fa nihevitra kosa izy fa teo akaiky teo ny fiainany taloha.
Nandeha lavitra izy ireo mandra-pahatongan'izy ireo tao amin'ny trano iray izay fantatr'i Laure ho azy. Ny tranobe dia mifanaraka amin'ny famaritana nomeny ny Dr. Gaston ao Paris. Nisy varavarankely goavambe lehibe, varavarankely nanodidina ny trano ary nisy teratany kely teo an-tampon-trano.
Ny fahatsiarovana ny fiainana taloha: Laure mahatsiaro ny toerana nandevenana azy tao amin'ny Fiangonana Genoa
Ny tena mahatalanjona dia fahatsiarovam-pahatsiarovana izay nahita ity trano ity. Tsy nanana an'io fahatsiarovan-doha io izy talohan'izao ary azo lazaina ho toy ny fahatsiarovana ara-jeografia, tohanan'ny toerana efa nisy teo aloha. Ian Stevenson nitantara ny fanambarany:
"Nilaza izy fa azo antoka fa tamin'ny andro teo aloha dia tsy nalevina tao amin'ny toeram-pandevenana ny vatany, fa tao amin'ny fiangonana ihany koa." (1)
Dr. Gaston dia nanadihady izany fanambarana izany tamin'ny alàlan'ny firaketan'ny fiangonana. Ilay trano dia an'i Benjamino Spontini, ny vadiny Giovanna, dia nalevina tao amin'ny fiangonana tao Notre-Dame-du-Mont nandritra ny lanonana manokana. Indrisy, tsy nisy filazana ny fitadiavana ny fitoviana amin'ny endrika ivelany na ny maha-olona an'i Giovanna sy Laure.
Fahatsiarovana jeografika: I Laure dia nahatsiaro fahatsiarovana manokana, ny fandevenana ao amin'ny fiangonana eo an-toerana fa tsy ny fasana, rehefa nahita ny fiainany taloha. Izany fahatsiarovan-tena izany dia nanjary marina.
Ity tranga ity dia mampahatsiahy ny Francesco Foscari | Wayne Peterson raharaha momba ny fanambadiana. Rehefa nanao dia nankany Venezo i Wayne, dia nieritreritra ihany koa izy hoe aiza no nandevenana azy fony izy mbola vao nofoanana tahaka an'i Francesco Foscari. Na dia efa niandrasana aza fa ny Foscari dia tokony hiondrana tao amin'ny Katedralin'i St. Mark, dia nahafantatra i Wayne fa navela hipetraka tany an-toeran-kafa izy.
Wayne nandeha tany amin'ny Basilica Franciscan di Santa Maria Gloriosa dei Frari, fiangonana kristianina iray. Tao izy dia nentina teo anoloan 'ny fiangonana. Tao izy dia nijanona teo amin'ny sakana mena iray misy marika iray izay nanondro fa voarara ny fidirana maromaro. Nahazo hafatra anatiny i Wayne fa tokony hiampita ny sakana mena izy ary handeha any aoriana. Nataony, ary teo, tao ambadiky ny fiovana, dia nahita ny fasan'i Francesco Foscari i Wayne.
Fiovana amin'ny finoana: Ity tranga ity koa dia maneho tranga iray izay nanovan'ny fivavahana na rafi-pinoana ara-panahy avy amin'ny fampodiana ho an'ny hafa. Tsarovy fa nomena ny fanomezam-boninahitra ny fandevenana an'i Gioanna Spontini ao amin'ny fiangonana Notre-Dame-du-Mont amin'ny fety manokana. Midika izany fa tsy Kristiana fotsiny i Gioanna, fa tokony ho Kristianina tena nino azy.
Mifanohitra amin'izany kosa, i Laure dia nikomy tamin'ny Eglizy Katolika Romana hatramin'ny naha-kely azy. Tsy maintsy noterena handeha ho any am-piangonana avy amin'ny ray aman-dreniny izy ary nilaza fa taorian'ny fahafatesana dia tsy nankany amin'ny lanitra na helo ny olona, ​​fa hiverina indray izy ireo. Noho izany, dia nisy kristiana nalaza tamin'ny fahatongavana vao teraka talohan'ny nahaterahan'i Jesosy.
1. Stevenson, Ian: Ireo trangam-pitaovan'ny zaza teraka indray, McFarland, 2003, pejy 30